Faravohitra : nosamborin’ny polisy ilay milaza ho “informateur” an’ny BC Anosy | NewsMada
Nilaza ho mpiasan’ny BC Anosy indray ity lehilahy iray. Voasambotry ny polisy izy io, nahitana fanamiana miaramila sy karatra hosoka.
Mahazo vahana eto amintsika indray ity fisandohana ho mpitandro filaminana ity. Taorian’ny nahasamborana ireo zandary sandoka tany Toamasina, teto an-dRenivohitra indray ity milaza ho mpanome vaovao akaiky ny polisin’ny BC. Hatramin’ny fisoratana ny asany any amin’ny fokontany, nataon’io ho mpanome vaovaon’ny BC io avokoa. Voasamboatra teny Faravohitra izy io tamin’ity herinandro ity, ary mbola nahitana fanamiana miaramila tao an-tranony. Toy izany koa ny karazana karatra sy fitaovana maromaro fampiasan’ny mpitandro filaminana.
Nilaza ny polisy fa tsy manana mpanome vaovao olon-tsotra ampiasainy ny BC Anosy. Entanina ny olona mba samy ho mailo amin’ny mpisandoka eto an-drenivohitra na amin’ny faritany. “Azo atao ny mampilaza ny mpitandro filaminana raha misy ny olona mampiahiahy na mitonona ho mpitandro filaminana na mpiara-miasa akaiky”, hoy ny fanazavana avy amin’ny polisy.
Amin’ny ankapobeny, misoloky maka volan’olona ireny olona misandoka ireny. Milaza ho mahavita mikarakara taratasy. Ankoatra ny fisandohana ho mpitandro filaminana, ny eny amin’ny fitsarana ihany koa no tena malaza amin’ny asa ratsy fisandohana. Maro koa ny eny amin’ny minisitera sasany eny.